Usuku My Pet » 10 Tindlela tekwakha A Bodacious bachelorette Pad!
"Akukho indawo efana nekhaya."—Wizard of Oz
Kungakhathaliseki uphola online, long-distance, noma bacwiliswa ngasese an romance ehhovisi, the "setting" ekugcineni uthando lwakho indaba kuyokwenzeka endaweni yakho.
Futhi like it or not, efulethini yakho, ekhaya, noma emjondolo, a lot mayelana ungubani futhi ubuwena uthi. Like nje izingubo zakho, emphakathini lukhulu ngobuntu bakho yokuphila.
Yini eyakho ngawe?
Uma ungathanda eyakho ukusho uku impahla umshado, noma umuntu kancane worthy of uhlanganyela futhi ukwazi kangcono, cabanga ngala amathiphu ezifika ngesikhathi.
Ubuciko DO'S lwemithetho
1. Ingabe ukwenza endaweni yakho eliyingqayizivele, reflection ezithakazelisayo ungubani.
Kungakhathaliseki kungcono whimsical, uyisidala, noma bold and bodacious, abeke spin yakho siqu kuso.
Lokho ubuhle kokuba spot yakho siqu: isikhala sakho, ukunambitheka yakho!
Bona ukuthi yini ukwazi ukubhala. Zama ahlanganiswe imibala ehlukene, izitayela, yokwenza, ngisho isikhathi nezikhathi. In the izigaba kokuqala, musa uchitha imali eningi uze usuqiniseka lokho udalelwe yakho yokuphila.
3. Cabanga Psychology of imibala.
Ingabe bewazi ukuthi anemibala ezithile inethonya indlela ozizwa ucabanga ekamelweni ethile noma setting? Ngokwesibonelo, beige nomhlaba tone imibala ekusiza; kanti imibala like red and orange basuke evuselelayo. Abamabhizinisi bayisebenzisela therapy umbala sonke isikhathi ekukhiqizeni izimpendulo ezithile efiselekayo. Nawe kufanele wenze okufanayo.
4. Gcina amakota yakho nice and Lihle.
Umama Wakho kwakulungile. Akukona nje kuphela lo mkhuba neqhaza ekwakheni umbono omuhle nabobulili obuhlukile, abesehamba elide sengqondo kuyanisindisa isikhathi nemali.
5. "Bloom lapho ubhekene watshala."
Ukuletha kancane imvelo ngaphakathi endlini njalo Ukuthutha smart. Izimila ukudala umuntu azizwe eneme nenduduzo. Baphinde basize ukuhlinzeka okuhle izinga lomoya. Ngisho uma awuzalwanga a "isithupha green,"Kunezinhlobo ezahlukene zezitshalo ezidinga kancane" nokuzilungisa "kunalokho nezilwane ezifuyiwe. Clueless? "Izitshalo lula okhula" Google noma uvakashele isigaba yakho usizo wendawo Garden Home Depot sika.
6. Cabanga yizinhlobonhlobo obhasikidi.
Ngiyakuthanda obhasikidi! You uzokujabulela. Zingakwazi engabizi, ezikhangayo, futhi kulula ukuthola.
Sebenzisa kubo for isitoreji: ukubamba isilwane amathoyizi, amathawula, CDS, zezinkambi enongiwe, noma njengoba zokuhlobisa art izicucu ezibekwe osendaweni ezindongeni. Xuba umatanise imibala ehlukene, osayizi kanye emaphethini aluka for ukusebenza esiphezulu.
7. Azungeze it ngezinto omthandayo.
Uma ungumuntu lover umculo, kungaba guitar noma isigubhu. Kungaba pretty, zokuhlobisa ozimele ukuthi "indlu" izithombe nomndeni wakho noma nezilwane. Uma nithanda ukuhamba, mhlawumbe ungase sibonise images of ezindaweni-away futhi imbulunga noma ezimbili. Engeza lokhu, abanye amakhandlela olunephunga elimnandi, noma umthombo ukuzola, for a nice yokuqedela touch.
8. Ungasikhohlwa ekamelweni ekhishini.
Kuba khona imibhangqwana eminingi ukuchitha okukhulu isikhathi babelana ngokudla, fun, nokwakha izinkumbulo obuhlala.
9. Thenga at uxhaxha of izindawo amadili best.
Ungakwazi amaphuzu ezinye izinto ezinkulu ezindaweni like wangakini Family Dollar, quality Thrift izitolo, estate yokuthengisa kanye nezimakethe zigcwele, ngisho Craigslist.
10. Qiniseka okumelwe usithathe ngaphambi nangemva izithombe.
It 'uzokunika umuzwa omkhulu wokufeza okuthile injabulo, kanye nemibono ewusizo for izithuthukisi esizayo.
Intwasahlobo yokuhlanza emkhathizwe, akukho isikhathi esingcono ukususa pretty up indawo yakho futhi!